Mozika Pop Indie Pop: hamoaka ny «Ho Iray» i Lucas Ravoson - ewa.mg
Mozika Pop Indie Pop: hamoaka ny «Ho Iray» i Lucas Ravoson
News - Mozika Pop Indie Pop: hamoaka ny «Ho Iray» i Lucas Ravoson
Hivoaka, anio, asabotsy 17 oktobra
2020 ny hira, ahitana rindrantsary «clip» mitondra ny lohateny «Ho
Iray» an’i Lucas Ravoson. Efa-taona niakarana an-tsehatra, mivoy ny
gadona Pop, Indie Pop ny tovolahy. Nahafantarana azy ny «cover» sy
ny fandikana, fihirana sanganasan’olon-kafa na ny «interprétation»
maro isan-karazany. «Anisan’ny hira navoakako , ny volana avrily
teo ny «Tia ho faly», aingam-panahy notakarina sy narindran’i
Lighthouse-Patrick Wat­son, izay nampiana ny tonon-kirako», araka
Tanora te hitondra anjara biriky amin’ny atao hoe «révolution
musicale» eto Madagasikara i Lucas
Ra­vo­son, raha ny filazany. «Satria hita tokoa fa maro ireo
mpanakanto efa miala amin’ny mahazatra, izany hoe, mametraka ny
maha izy azy eo amin’ny tontolon’ny mozika… Mba te hitondra
zava-baovao ihany koa aho, noho ny ny talenta nomen’Andriamanitra,
tsy maintsy ampitomboina foana ka atao izay hampiasana azy amin’ny
tsara», hoy i Lucas Ravoson. Misokatra amin’ny fiaraha-miasa
rehetra ny tenany ary manana ny kaonty “facebook” Lucas Ravoson, ho
an’ireo te hifanerasera aminy.
L’article Mozika Pop Indie Pop: hamoaka ny «Ho Iray» i Lucas Ravoson a été récupéré chez Newsmada.
Kubota: tokony hisy fahazoan-dalana mitondra
« Aleo hitondrako azy », hoy ny tovolahy iray, rehefa handeha hamonjy fodiana ny mpianakavy avy nitokana tranovao, tany Andrangorona, Kaominin’Ambohidavana, disitrikan’Ambatondrazaka. Efa tao anaty vagaon’ilay kubota ny mpianakavy, tamin’io fa ilay efa zatra mitondra ity fitaovam-pitaterana entina môtera kosa mbola nisy nahavariana azy. Ny faran’ny volana septambra no niseho izao loza manaraka izao.Dia nandeha…Nihazo toerana kisilasila …Tsy voafehin’ilay mpamily mpiana-draharaha ilay kubota ka nivadibadika. Zaza roa no maty teo no ho eo. Olona fito hafa naratra mafy ary nampidirina hôpitaly ao Ambatondrazaka… Ireo no isan’ny lozabe nitranga satria tsy izay afaka mamily io fitaovana entina milina akory dia mahafehy ny fitondrana azy.Hatreto aloha, taratasy tsotra fanomezan-dalana (Attestation) no omena ny olona iray hahazoany alalana mitondra kubota, fa tsy mbola misy ny fahazoan-dalana “permis” toy ny fiarakodia sy ny moto. Asa moa izay andinin-dalàna mametra izany fa tsy nety nisy ny valiny mahafa-po rehefa natao ny fanadihadiana. Nisy nanontany koa ny hoe:”Mba ao anaty fehezan-dalan’ny fifamoivozana an’arabe koa ve ny bajaj sy ny tuc tuc, fiara kodiaran-telo mitovy amin’ny kubota?” Rarivo L’article Kubota: tokony hisy fahazoan-dalana mitondra a été récupéré chez Newsmada.
Fanolorana Vata Fampangatsiahana sy « Kits de prévention » COVID-19 avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena sy ny UNICEF
Anatin’ny fanohizana ireo ezaka lehibe ataon’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka hanatsaràna ny kalitaon’ny tolotra fanaovam-baksiny eto Madagasikara ny fanànana fitaovana fitahirizana manarapenitra ireo vaksiny. Nanolotra fitaovana ho fanohanana ny sehatry ny fahasalaman’ny Reny sy ny Zaza ireo mpiaramiombonantoka akaiky amin’ny Ministera, amin’ny alalan’ny DPEV – Direction de Programme Elargi de la Vaccination, dia ny Banky Iraisampirenena izay nanolotra vata fampangatsiahana mandeha amin’ny herin’ny masoandro miisa 130, ary ny Unicef izay nanolotra « kits de prévention » ho fisorohana amin’ny Covid-19, androany, tao an’efitranon’ny SALAMA teny Anosiala Ambohidratrimo. « Zavadehibe sy manandanja ireo fitaovana ireo amin’ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman’ny Reny sy ny zaza manerana ny Nosy, mba ahafahana manao vaksiny ny zaza malagasy rehetra, isorohana amin’ireo karazan’,aretina » hoy Atoa Sekretera Jeneraly, solotenan’ny Ministrin’ny Fahasalamambahoaka, raha nandray ireo fitaovana tamin’ny fomba ofisialy. Ho tsinjaraina manerana ireo CSB sy hopitaly amin’ireo distrika 15 anatin’ny faritra 5 ( Analamanga, Itasy, Alaotra Mangoro, Bongolava, Vakinankaratra ) ireo vata fampangatsiahana, hanavaozana ireo fitaovana efa tranainy izay efa tsy manaraka ny fenitra intsony. Sary sy fanadihadiana : SCM/MSANP Lahateny feno an’Andriamatoa Sekretara Jeneraly : https://www.youtube.com/watch?v=zmc7k7GHDg4&t=7s L’article Fanolorana Vata Fampangatsiahana sy « Kits de prévention » COVID-19 avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena sy ny UNICEF a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Fiatrehana CEPE: notolorana fitaovam-pianarana ireo ankizy kamboty
Fikambanana tsara sitrapo tsy manaiky nitonona anarana eto Toamasina ny hany nitondra fanampiana ho an’ireo ankizy beazina etsy amin’ny ASPE (Association sauve-garde pour la protection de l’enfance) etsy Betainomby – Toamasina suburbain, ny alatsinainy maraina teo. Ankizy mpianatra 21 mianadahy hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE, anio talata 15 septambra, ireto notolorana fitaovana ireto.Raha hiverenana, ankizy tsy misy mpiahy eny anivon’ny fiarahamonina ary alefan’ny fitsarana eny amin’ny ivontoerana fitaizana ankizy mania ireo beazina ao amin’ny ASPE. Tsy nitazam-potsina azy ireo, araka izany, ilay fikambanana tsara sitrapo fa nitondra izay voatsirambin’ny tanany ahafahan’ireo ankizy ireo miatrika am-pitoniana CEPE. Marihina fa miisa 7 428 ny mpianatra voasoratra anarana hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE eto Toamasina anio, mitsinjara amin’ny efitranom-panadinana miisa 19. Mpianatra manana fahasembanana amin’ny fahitana ny roa amin’ireo, ny dimy kosa, manana fahasembanana amin’ny fihainoana sy ny fitenenana. 7 taona kosa ny zandriny indrindra raha 35 taona ny zokiny.SajoL’article Fiatrehana CEPE: notolorana fitaovam-pianarana ireo ankizy kamboty a été récupéré chez Newsmada.